Don Draper kwuru nke amamihe amamihe | Martech Zone
Tọzdee, Machị 13, 2014 Tọzdee, Machị 13, 2014 Douglas Karr
Agubeghi m onye ndi dere ya Mad Men, ma obi abụọ adịghị ya na ha nwere ụfọdụ folks na ndị ọrụ ha na-arụ ọrụ na ụlọ ahịa ahịa. Echere m na ha ga-echekwarịrị mmụọ ha niile banyere ụlọ ọrụ ahụ kemgbe ọtụtụ afọ wee zọpụta ha maka nke a, agwa dị egwu nke Jon Hamm mere.
Ndị a bụ ụfọdụ ọkacha mmasị m Don Draper kwuru:
Ndị mmadụ na-agwa gị ndị ha bụ, mana anyị na-eleghara ya anya n'ihi na anyị chọrọ ka ha bụrụ ndị anyị chọrọ ka ha bụrụ.
Ndị mmadụ chọrọ ka agwa ha ihe ha ga-eme jọrọ njọ nke na ha ga-ege onye ọ bụla ntị.
Are bụ ngwaahịa. Ọ dị gị ka ọ dị ihe. Nke ahụ bụ ihe na-ere. Ọ bụghị ha. Ọ bụghị mmekọahụ. Ha enweghị ike ime ihe anyị na-eme, ha kpọkwara anyị asị maka ya.
Mgbasa ozi dabere na otu ihe, obi ụtọ. You makwaara ihe bụ obi ụtọ? Obi ụtọ bụ isi nke ụgbọ ala ọhụrụ. Enwerela onwe ya n’egwu. Ọ bụ mpempe akwụkwọ dị n'akụkụ okporo ụzọ na-eti mkpu mmesi obi ike na ihe ọ bụla ị na-eme dị mma. Odi nma.
Ihe omuma a di egwu, Don Draper Obere oge nke amamihe Amamihe si Glow Media ọhụrụ.
Tags: donye draperdonyere draperjon mmajon hamm na-ekwuụmụ nwoke ndị isi mmebiara na-ekwu okwu